दीपिकालाई प्रश्न : ‘छपाक’मा लगानी कसको ?
मुख्य पृष्ठकला मनोरञ्जनदीपिकालाई प्रश्न : ‘छपाक’मा लगानी कसको ?
विराटनगर, २१ पुस । बलिउडकी चर्चित अभिनेत्री दीपिका पादूकोण अभिनित फिल्म ‘छपाक’ यही शुक्रबार जनवरी १० बाट प्रदर्शनमा आउँदै छ । एसिड आक्रामणबाट बचेकी लक्ष्मी अगरवालको कथामा आधारित रहेको फिल्मलाई दीपिका आफैँले निर्माण गरेकी हुन् ।
उक्त फिल्मबाट दीपिकाले पहिलोपटक फिल्म निर्माणमा हात राखेर निर्माता बनेकी छन् । उनले केए ब्यानरबाट फिल्मलाई निर्माण गरेकी हुन् । फिल्मको गीत सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा दीपिकालाई फिल्मको लगानी गरेको रकम रणवीरको वा एउटै परिवार भएकाले रणवीरको पनि लगानीमा साझेदारी छ कि भनेर प्रश्न सोधिएको थियो ।
दीपिकाले प्रश्नको जवाव दिँदै फिल्ममा रणवीरको लगानी नभएको र फिल्ममा जति पनि लगानी छ, त्यो सबै आफ्नै रहेको बताएकी छन् । आफूले कमाएको रकम नै फिल्ममा लगानी गरेको थप्दै नयाँ फिल्म ‘महाभारत’मा पनि लगानी गर्न लागेको जानकारी दिएकी छन् । फिल्ममा दीपिकाले ‘द्रौपदी’को र अभिनेता ऋतिक रोशनले ’कृष्ण’ को भूमिका निर्वाह गर्दै छन् ।